ewe okanye cha
Buza umbuzo uze uphendule: ewe okanye cha
Uhlala ulindele ukuba uphendule ewe okanye cha? Uhlala wabuza imibuzo kangaphi? Cishe wonke umntu ucela imibuzo embalwa ngosuku kwaye ufuna ukufumana iimpendulo kubo. Ngokuqhelekileyo, abantu baphoqelelwe ukwenza ukhetho. Ewe okanye Hayi, ezi ziimpendulo eziphambili kwimibuzo emininzi. Uyakuqonda njani impendulo ethi: ewe okanye cha, iya kuba yileyo? Ukuba ungathandabuzeki kwaye awukwazi ukwenza ukhetho, ke lixesha lokutyelela indawo yethu. Uze ufumane impendulo yokukhetha: ewe okanye cha. Kwiziko le da-no.ru?lang=xh unokubuza nayiphi na imibuzo engaphendulwayo ewe, hayi. Indlela yokusebenzisa isayithi?
Mane ubhale umbuzo wakho kwaye nqakraza kwi "Buza" iqhosha. Emva kwemizuzwana embalwa, impendulo ibe nguwe ewe okanye cha. Ewe, iimpendulo zinikezwa ngokungaqhelekanga. Kwaye awukwazi ukuthembela ngokupheleleyo le ndlela. Nangona kunjalo! Inkonzo Yempendulo EWE HAYI inceda ukunqoba ukungalungi kwaye wenze isigqibo esifanelekileyo. Ukuba ufumene impendulo Hayi, kodwa ufuna ukufumana impendulo YEBO, oko kuya kukunika ithemba. Ukuba ufuna ukufumana impendulo NO, kodwa u-Ewe, ke umbuzo wakho uya kukunyanzela kwakhona ukucinga izinto kwaye uthathe isigqibo esifanayo.
Kukho nawuphi na, inkonzo YES / NO ayimangalisi kwaye inceda ukwenza izigqibo. Nangona iimpendulo zinikezelwa ngokulandelelana ngokupheleleyo. Kwaye bahlala bephosakele. Kodwa kuphela ukhetha ukhetho. Indawo ethi "EYE okanye CHA" inceda ukuqonda ukuba yiyiphi ikhethelo yokwenza: yebo okanye cha.